बागमतीमा राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार, को-को बन्दैछन् मन्त्री ? « Drishti News – Nepalese News Portal
१० कार्तिक २०७८, बुधबार 7:08 pm
काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएको छ । बुधबार मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले पदबाट राजीनामा दिएसँगै नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको हो ।
संघीय सरकारमा गठबन्धन गरिरहेका चार दलमध्ये प्रदेश सभामा रहेका प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले यसअघि नै पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भइसकेको छ ।
नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले भोलि (बिहीबार) तीन बजेभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छन् । तर, गठबन्धले आजै आजै दावी पेश गर्ने तयारी भइरहेको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले बताए ।
पाण्डे झण्डै सात महिना मुख्यमन्त्री हुनेछन् । त्यसपछिको बाँकी समय कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । गठबन्धनबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ ।
सुरुमा बागमती र प्रदेश १ मा एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । तर कांग्रेसले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेपछि शीर्ष नेताहरुबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको हो ।
को–को बन्दै छन् मन्त्री ?
गठबन्धनका तर्फबाट नेतृत्व गर्ने मन्त्री र मन्त्रालयको विषय पनि टुङ्ग्याइसकेको लामाको भनाइ छ । उनका अनुसार तत्काल प्रदेश सरकारमा नेकपा मओवादी केन्द्रको तर्फबाट दलकी उप–नेता कुमारी मोक्तान, कांग्रेसका उप–नेता कृष्णलाल भडेल र नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका उप–नेता कृष्ण खनालले जिम्मेवारी पाउनेछन् ।
सरकारका जाने मन्त्रीहरुमध्ये माओवादीले आर्थिक मामिला, कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा जिम्मेवारी पाउने स्रोतले जानकारी दिएको छ । तिहार लगत्तै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र सरकार विस्तारको काम अघि बढ्ने सचेतक लामाले बताए ।
१०९ सदस्यीय प्रदेशसभामा नयाँ सरकार बनाउन ५५ मत भए पुग्छ । बागमतीमा पाँच दलीय गठबन्धनसँग ५९ सांसद छन् । स्रोतका अनुसार गठबन्धनमा रहेका ५९ जनाले नै नयाँ मुख्यमन्त्रीमा पाण्डेलाई चयन गर्न हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
बागमतीमा माओवादीसँग २३, कांग्रेससँग २२, एकीकृत समाजवादीसँग १३ र जसपासँग एक जना सांसद रहेका छन् । सत्ता ढलेको एमालेसँग भने ४३ सांसद छन् । त्यस्तै विवेकशील साझा पार्टीसँग ३, नेमकिपाका २ र राप्रपसँग १ सांसद रहेका छन् ।
विभाजन हुनुअघि एमाले सांसदको संख्या ५६ रहेको थियो । तर एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि एमालेको सांसद संख्या ४३ जनामा खुम्चिएको हो ।